ဟဒီးဆ်: အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ညီနောင်အား ချစ်ခင်ပါက ၎င်းအား ချစ်ခင်ကြောင်း အသိပေးပါ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ညီနောင်အား ချစ်ခင်ပါက ၎င်းအား ချစ်ခင်ကြောင်း အသိပေးပါ။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ကောင်းမြတ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား။ .
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد]
အဗူကရီမဟ် မိက်ဒါဒ်ဗင်န်မအ်ဒီကရိဗ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်တော်မူသည်။အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ညီနောင်အား ချစ်ခင်ပါက ၎င်းအား ချစ်ခင်ကြောင်း အသိပေးပါ။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဆွဟီးဟ် အဆင့်ရှိသည်။ - သိရ်မိဇီကျမ်း။
မြောက်မြားစွာသော ဟဒီးဆ်တော်များသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေနပ်မှုရရန် ရည်ရွယ်၍ အပြန်အလှန်ချစ်ခင်မှုထားကြရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး ရရှိမည့်အကျိုးကုသိုလ်ကိုလည်း တင်ပြထားသည်။ ဤဟဒီးဆ်တော်သည် အရေးပါသော အဓိပ္ပါယ်တစ်ရပ်ကို ညွှန်ပြနေသည်။ ၎င်းသည် မုအ်မင်န်အချင်းချင်းကြားဆက်ဆံရေးကို အနက်ရှိုင်းဆုံး အကျိုးသက်ရောက်စေပြီး ချစ်ခင်မှုကို ပြန့်ပွားစေမည်။ ယင်းမှာ မိမိညီနောင်အား ချစ်ခင်ကြောင်း အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းသည် လူမှုအဖွဲ့စည်းအား ချည့်နဲ့ပြိုကွဲစေမည့် လုပ်ရပ်များမှ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ထိုသို့ ထိန်းသိမ်းပေးရန် အစ္စလာမ့်လူ့အဖွဲ့စည်းရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီအကြား ချစ်ခင်မှုကို ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် လူမှုရေး နှောင်ကြိုးအား အစ္စလာမ့်ညီနောင်(ဟူသော စိတ်ဓာတ်)ဖြင့် ခိုင်မာအောင် ပြုလုပ်မှသာ ရရှိနိုင်မည်။ ဤအရာအားလုံးတို့အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် ချစ်ခင်ကြသူများကြား၌ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ခင်ကြောင်း အပြန်အလှန်အသိပေးခြင်းကဲ့သို့ ချစ်ခင်မှုကိုရရှိစေမည့် အကြောင်းခံများကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်သာရရှိလိမ့်မည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဗီယက်နမ် ဆင်ဟာလီ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ်
အကြင်သူသည် မိမိ၏ ညီနောင်အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် ချစ်ခင်ပါက ၎င်းအား ချစ်ခင်ကြောင်း အသိပေးပါ။
ထိုသို့ အသိပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးတစ်ရပ်မှာ ၎င်းအား ချစ်ခင်ကြောင်း သိသွားသောအခါ မိမိညွှန်ပြလိုက်သည့် လမ်းမှန်တရားနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆုံးမစကားကို လက်ခံပြီး သူမသိသော ကောင်းကျိုးများဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်သည့်စကားကိုလည်း ငြင်းဆန်မည်မဟုတ်ပေ။
ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးပွါးလာစေရန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် မိမိချစ်ခင်ရသောသူအား ချစ်ခင်ကြောင်း အသိပေးခြင်းသည် မွတ်စ်သဟဗ်ကောင်းမွန်သော ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ကောင်းမြတ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား။ .
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . အစ္စလာမ့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . စကားပြောခြင်းနှင့် ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဆိုင်ရာ အာဒါဗ် စည်းကမ်းများ။ .
ရောင်းသည့်အခါ၊ ဝယ်သည့်အခါနှင့် မိမိ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုသည့်အခါ သက်ညှာထောက်ထားသူကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကရုဏာသက်တော်မူပါစေ။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် လူတို့အား အကြွေးပေးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းက မိမိ၏ အခိုင်းအစေအား သင်သည် ကျပ်တည်းသူဆီသို့ အကြွေးသွားတောင်းလျှင် စောင့်ဆိုင်းပေးပြီး နူးညံ့စွာဆက်ဆံပါ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်ရန် မျှော်လင့်ရသည်ဟု အမြဲပြောလေ့ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုသူသည် (ကွယ်လွန်ပြီးနောက်) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ အရှင်မြတ်က သူ့အား ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အား ကျွန်တော်မျိုးအား ဆုံးမတော်မူပါဟု လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်က အသင် ဒေါသမထားနှင့်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထားခဲ့ရာ ကိုယ်တော်က (အကြိမ်တိုင်းတွင်) အသင်ဒေါသမထားနှင့်ဟုသာ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ဧကန်မုချ တရားမျှတသူများသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးတွင် နူရ်အလင်းရောင်နှင့်အတိဖြစ်သော ပလ္လင်များထက်ဝယ်ရှိကြလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏ အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်၌လည်းကောင်း၊ မိမိတို့၏ မိသားစုများတွင်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ တာဝန်ယူရသည့် ကိစ္စတို့၌လည်းကောင်း တရားမျှတမှုရှိကြသည်။
အတင်းပြောခြင်းသည် အဘယ်အရာကို ခေါ်ဆိုကြောင်း အသင်တို့သိကြပါသလော။ သာဝကကြီးများက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် အရှင့်ရစူလ်တမန်တော်သာ အသိဆုံးဖြစ်ပါသည်ဟု ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်က မိန့်ကြားတော်မူသည် အသင့်ညီနောင်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းမနှစ်မြို့သောအရာကို ပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी Tiếng Việt සිංහල كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ்
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဗီယက်နမ် +ဆင်ဟာလီ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ်